ဒေါသကို လွယ်ကူစွာ ချုပ်ထိန်းခြင်းအနုပညာ - Hello Sayarwon
ဒေါသကို သာမန်လူတိုင်း ထွက်ဖူးကြပါတယ်။ ဒေါသဟာ လူတွေ တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေထဲက သာမန်စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒေါသထွက်တာကို လူတော်တော်များများက မကောင်းဘူးလို့ ထင်မြင်ယူဆကြပေမဲ့ ဒေါသကနေ ရလဒ်ကောင်းတွေယူဆောင်လာနိုင်ချေကလည်း အများကြီးပါ။ ဥပမာ – ကိုယ့်ကို မတရားဖိနှိပ်ညှင်းဆဲတာကို ဒေါသထွက်တတ်ရမယ်၊ ငြိမ်ခံနေခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဖြေရှင်းရမယ့်အရာဆိုတာ သိရမယ်။ ဒီလိုဆို… ဒေါသရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေပေါ့။ သို့သော် ကိုယ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ဒေါသပမာဏတော့ ဖြစ်ရမယ်။ မဟုတ်ရင် ဒီဒေါသစိတ်က ကိုယ့်ကို ဝါးမျိုသွားပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာ မှားယွင်းသွားစေနိုင်ပြီး နောင်တရစရာ ရလဒ်ဆိုးများဖြစ်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု ပျက်စီးသွားတာ၊ ပြန်ပြင်ဆင်လို့မရနိုင်တဲ့ အမှားမျိုးတွေလုပ်မိသွားတာတွေ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို နောင်တရစရာတွေ မဖြစ်ခင် Anger Management ဆိုတဲ့ ဒေါသစိတ်ကို ထိန်းချုပ်စီမံမှုမျိုးပြုလုပ်တတ်ရပါမယ်။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း ကိုယ့်ဒေါသ ငယ်ထိပ်မရောက်ခင် ကိုယ်တိုင်သတိပြုမိပြီး ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဥပမာ – ချွေးတွေအရမ်းထွက်လာတယ်၊ အသားတွေ တုန်လာတယ်၊ နှလုံးခုန်နှုန်းတွေ မြန်လာတယ် … စသည်ဖြင့် စောစီးစွာ သတိပြုမိဖို့တော့လိုပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အသုံးချဖို့လွယ်ကူတဲ့ anger management နည်းလမ်းအချို့ကို
(၁) စိတ်နှင့် ပုံဖော်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာများ
(၂) လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများ ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းခွဲ ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
– စိတ်ကူးလေးနဲ့ အသာယာဆုံးသော နေရာလေးတစ်ခုကို ခရီးထွက်ခြင်း
(ဒီနေရာမှာ အသေးစိတ်လေးကို အာရုံပြုစေလိုပါတယ်။ ဥပမာ – ရထားလေးစီးပြီး ခရီးသွားတယ်။ ရထားလေးဟာ စိမ်းစိုနေတဲ့ တောအုပ်လေးတစ်ခုထဲ ခုတ်မောင်းနေတယ်။ ဘေးမှာ စိမ်းစိုနေတဲ့ တောအုပ်တွေရှိတယ်။ ဟိုးအဝေးတစ်နေရာကနေ ရေတံခွန်တစ်ခုက ရေစီးဆင်းသံကို ကြားနေရတယ်။ ငှက်ကလေးတွေ တေးသီနေတာကိုလည်း ကြားရတယ်…. စသည်ဖြင့် မျက်လုံးလေး ခေတ္တခဏမှိတ်ထားပြီး စိတ်ကို အနားယူလိုက်သင့်ပါတယ်။)
– ၁၀ မှ ၁ သို့ ပြောင်းပြန်ရေတွက်ခြင်း
(နံပါတ်တွေ များရာမှ နည်းသွားသလို ဒေါသတွေကိုလည်း များရာမှ နည်းသွားစေနိုင်တဲ့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းနဲ့ မှန်မှန် ရေတွက်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒေါသအရမ်းထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ၁၀၀ မှ ၁ သို့ ရေတွက်ခြင်းဟာ ပိုမိုထိရောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။)
– အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်း
(လူတိုင်း အသက်ရှူပါတယ်။ သို့သော် အသက်ရှူလေကျင့်ခန်းဆိုတဲ့ အရာကတော့ သာမန် အသက်ရှင်ဖို့ အသက်ရှူနေပုံမျိုးနှင့် ကွာခြားပါတယ်။ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ အထဲမှာမှ အလွယ်ကူဆုံးအရာကတော့ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်နိုင်မယ့်နေရာမှာ အရင်ဉီးဆုံး ထိုင်နေလိုက်ပါ။ လက်တစ်ဖက်ကို ရင်ဘတ်ပေါ်၊ နောက်တစ်ဖက်ကို ဗိုက်ပေါ်တင်ထားလိုက်ပါ။ ဗိုက်ပေါ်ကလက် မြောက်တက်သွားတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အထိ လေကို တစ်ဝကြီးရှူသွင်းလိုက်ပါ။ ပြန်ရှူထုတ်လိုက်ပါ။ ဖြည်းဖြည်းနဲ့ မှန်မှန်လုပ်ဆောင်ပါ။)
– စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးချလိုက်ပါ
(ကိုယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့သူက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတစ်ယောက်သာဆို တိုက်ရိုက်ပြောဆိုပစ်လိုက်တဲ့အရာဟာ ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးကို ပြန်ရဖို့ ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကိုပြောချင်တာတွေကို စာရွက်ထဲမှာ ရေးချလိုက်ခြင်းဟာ ကိုယ့်စိတ်ကို အတော်အတန် ပေါ့သွားစေပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ပြန်လည် တည်ငြိမ်လာပြီဆိုမှ ကောင်းမွန်စွာ စကားပြောပြီး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခြင်းဟာ ရလဒ်ကောင်းကို ပိုမိုရရှိစေမှာပါ။)
(ကိုယ်ဟာ ပန်းချီဆွဲတာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူလာ? စာတွေ၊ ကဗျာတွေရေးရတာ စိတ်ဝင်စားလား? ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်တတ်နေဖို့ထက် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဖန်တီးမှုတစ်ခုထဲမှာ စိတ်ကိုနှစ်ပြီး လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။ ဒီအရာက သင့်ကို ဒေါသထွက်စေတဲ့အရာကနေ အဝေးကို ခေါ်ဆောင်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။)
– ဂီတ တစ်ခုခုကို နားဆင်ပါ
(ဂီတက ဒေါသစိတ်ကို ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းနဲ့ ထိန်းချုပ်ပေးနိင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အရာတွေထဲက တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီတထဲ ခဏလေး စီးဝင်ခံစားနေလိုက်ပြီး ဒေါသထွက်စရာ ကိစ္စတွေကို မေ့ထားလိုက်ပါ။)
– ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားလုပ်ပါ
( ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့ အားကစားလုပ်ခြင်းက စိတ်ကို ငြိမ်စေပြီး ဒေါသစိတ်ကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ခဏတာ လမ်းထွက်လျှောက်ခြင်းမျိုးဟာလည်း လွယ်ကူပြီး အကျိုးရှိစေပါတယ်။)
ဒီအရာတွေကတော့ အလွယ်ကူဆုံးသော ဒေါသစိတ်ကို ထိန်းချုပ်နည်းများပဲဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ကိုယ်ဟာ ဒေါသထွက်လွယ်ပြီး ဒီနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ မထိရောက်လှဘူးဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုမျိုး ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ယခုအခါမှာဆိုရင် စိတ်ကျန်းမာရေး ပညာရှင်များ၊ therapist များလည်း မရှားတော့ပြီမို့ ဒေါသစိတ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေများမလာခင် သွားရောက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။